ပြဿနာ တချို့ မေးပါရစေ။ — MYSTERY ZILLION
မူလ › About Forum › Idea
ပြဿနာ တချို့ မေးပါရစေ။
June 2008 edited June 2008 in Idea
သိတဲ့သူအတွက်တော့ ပြဿနာဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာ/
:77:ဒီမှာ ပြဿနာလေးတချို့ ဖြေရှင်းပေးကြပါဦး။:77:
၁။ စေတန်ဂေါ့၏အီး-ဘွတ်များ၊( ဇော်ဂျီထည့်သွင်းနည်း+မြန်မာဘလော့ပြုလုပ်နည်း ) ၊ ညီလင်းဆက်ရဲ့ မြန်မာဘလော့နည်းနာများ-ဇော်ဂျီထည့်သွင်းနည်းများ စုံအောင်လုပ်သော်လည်း တချို့စက်တွေမှာ ဂျီမေး+ဂျီတော့ မြန်မာလိုပဲဖတ်လို့ရတယ်။ ရေးလို့မရဘူး။ ရေးချင်တယ်။ ပြဿနာအစစ်က ဘယ်နားမှာလဲ။
၂။ နောက်ထုတ်ထုတ် ( Kasparsky ) ကို update ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖရီး ရချင်တယ်။ ဘယ်သွားရှာရမှာလဲ ၊ ( ဟဲ .. ဟဲ အ, တယ်နော် )
၃. PenDrive-မှာ start.int နဲ့ BOOT.VBS ဆိုတဲ့ သေနာတွေကို သတ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အကြံဉာဏ်လေး။
၄. နက်ခန်း-အက်ဒမင်က ယူဆာတွေကို ဖောင့်အင်စတော လုပ်မရအောင် လုပ်ထားရင် ( သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံနဲ့ ) ဖောင့် ဖိုဒါ ထဲ ခိုး၀ှက်ထည့်တဲ့နည်းများသိရင် ( လူမိုက်အားပေး ) လုပ်ပါဦး။
ဒီတစ်ခါ ဒါလောက်ပါပဲ။ နောက် - ဒီ့ထက်ထူးမည်။
June 2008 edited June 2008 Registered Users
ဖောမယ်နော် ဘဘကြီး . . .:D
အဟီး . . .စတာ . . . စိတ်ဆိုးနဲ့။
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို သွင်းပြီးတာ သေချာရင်တော့ တစ်နည်းပဲရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့။ Gtalk မှာ setting ထဲ၀င်ပြီး font ထပ် change ကြည့်ပေါ့။ General ထဲက change font မှာ ၀င်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ပြောင်းကြည့်ပါဦး။ :67:(တစ်ခုတစ်လေ ဇော်ဂျီက installလုပ်ရက်နဲ့ မရတာကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်။ ( နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်တော့ရသွားတယ်:1:)
kasper နောက်ဆုံးထုတ်ဆိုတာ kaspersky8 ကိုပြောတာလား။ kas7ဆိုရင်တော့ အဲဒီအကြောင်းဆွေးနွေးထားတဲ့ နေရာမှာရှိပါတယ်။ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်နော် ။ ။:106:
အောက်ကအကြောင်းတွေကတော့ ပြောတာကျွန်တော်သိပ်နားမလည်ဘူး။ ပြီးတော့ နက်ခန်း-အက်ဒမင်က ပိတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပိတ်တာလဲ။ ဆော့၀ဲလ်နဲ့လား။ နောက်ပြီးမြန်မာဖောင့်နဲ့ မတည့်တဲ့ ဆော့၀ဲလ်တွေလဲ ရှိသေးတယ်။:((
ကျန်တာတွေကို သိတဲ့လူတွေဖြေကြပါလိမ့်မယ် . . .:101:
အခုဒီမှာ ကီးအချို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ကိုကလစ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်စင်တာမှာ သွားဆွဲချလိုက်ပါဗျာ။ KAV7 ကီးတွေပါ။ ကျနော်လည်း ဒီကီးတွေဘဲ သုံးနေတာပါ။ နောက်အသစ်ရရင်ထပ်တင်ပေးပါမယ်။
KAV7 ကီးယူဖို့ ဒီမှာ ကလစ် ...
Dr ရေ နံပါတ်2kaspersky7 key ကို ကိုစည်သူပေးထားတာနဲ့ပြန် share ပေးလိုက်ပါတယ်။\_:D/\_:D/ ရော့ယူလိုက််:6::6:။ setup file ကတော့ site မသိလို့မပေးတော့ဘူး။ www.kaspersky.com ကနေများရမလားပဲ။:5::5:
Zulu wrote: »
Kas7 နဲ့ပတ်သတ်ရင် တစ်ခါမှ မဆင်မပြေတဲ့ ကျွန်တော် အခုတော့ ကိုဇူလူးကျေးဇူးနဲ့ အဆင်ပြေပြီ။ :67: ကိုဇူလူးပေးတဲ့ ဆိုက်က ကျွန်တော်ခဏခဏ၀င်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၃၊၄ ထည့်ပြီးလို့မှ အဆင်မပြေရင် စိတ်မပါတော့ဘူး။ အခုတော့ ဒီဖိုင်ထဲကနေ တစ်ခုထဲနဲ့\_:D/\_:D/\_:D/
connection ကျသွားပြီးပြန်တက်လာတော့ auto post ပြီးသားဖြစ်နေတာဗျ။ ၀င်ဖောသလိုဖြစ်နေလို့။ အမှန်ကျွန်တော်အရင်ဦးတာဗျ။ အဟီး
ဒေါက်တာ ဘဘမျိုး မြန်မာလိုမရိုက်ရသေးတာက keyboard ၊ အဲ့ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်အကြောင်း ရေးထားတာ မတွေ့ဘူး အဲ့ဒါ မထည့်ရသေးလို့လား ဒေါက်တာ ဘဘမျိုး။
ဟုတ်များ ဟုတ်မလား ၀င်ဖောတာပဲး။
(မဟုတ်ရင် မှားပါတယ် ခင်ဗျာ) :P
June 2008 edited June 2008 Administrators
layong wrote: »
ဟုတ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ keyboard layout မထဲ့ရသေးတာပါ။ administrator က ပိတ်ထားရင်တော့ software သွင်မရဘူးနော်။
drkmyo wrote: »
ကြုံတုန်းလေး ၀င်ဖောလိုက်အုံးမယ်။ ၁။ဇော်ဂျီရေးချင်ရင် ကီးဘုတ်ထည့်ထားလား? ရေးရင်လေးထောင့်လေးတွေပဲပေါ်နေတာလား? ဘယ်လိုရေးလို့မရတာလဲ?၂+၃။ kasparsky update လုပ်ပြီးရင် pen drive ကို scan လုပ်လိုက် ။ ဂန့်ဂန့်နဲ့တောင်အော်သွားအုံးမယ်။ ၄။အက်ဒမင်ကပိတ်ထားတာ ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ရတာကတော့ အက်ဒမင် ပတ်စ်၀က်ကို ဟက်လိုက်။ လိုချင်ရင်ပြော ဆိုက်ဒ်တော့နည်းနည်းများမယ်။
ကံကြီးထိုက်တာ။ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ခိုးကြောင်ခိုး၀ှက် ဖောင့်ခိုးထည့်ထားတဲ့ စက်က သူများတွေ ဦးသွားလို့ ၄ထောင့်တုံးတွေ ၀က်ဘ်တက်စ်အယ်ဒီတာထဲ ပေ့စ်သွားသွားလုပ်ပြီး ဖတ်၇တယ်ဗျို့။ စမ်းလို့မရသေးဘူး။ m တွေအများကြီးပါတဲ့ သူ့စာဖတ်ရတော့ နေနိုင်တော့ဘူး။ ပတ်စ်၀က်ကို အပြတ်ဟတ်ချင်တယ်။ ဆိုက်ဒ်တွင် မကဘူး လမ်းညွှန်လေး ရော မြန်မာလို့ တော့လိုက်ဦး။ ဒီက ခပ်အအရယ် ။ ၀မ်း ဘိုင် ၀မ်း ရေးပြ။ ဟွန်း တွေ့ကြသေးတာပေါ့ - ကုလားအက်ဒမင်ရယ် ( ကြိုကြိမ်းထားလိုက်ပြီ။ )
mmmaung wrote: »
၄။အက်ဒမင်ကပိတ်ထားတာ ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ရတာကတော့ အက်ဒမင် ပတ်စ်၀က်ကို ဟက်လိုက်။ လိုချင်ရင်ပြော ဆိုက်ဒ်တော့နည်းနည်းများမယ်။
အဲ . . .
ကျွန်တော်မေးချင်တာ အဲဒါပဲ . . .
admin password ကို hack တယ်ဆိုတာ password ကိုပြောင်းလိုက်တာလား။ သိအောင်လုပ်ရုံတင် လုပ်တာလား။ အဲဒါကို တော်တော်များများက အကျယ်တ၀င့် ရေးတာတွေနေရလို့ပါ။ :39:
သူကလည်း ကိုယ့် ဘကြီးခေါ်ထားတော့ နည်းနည်းတော့ ပြန်ခေါ်ရမယ်။ ဒီကမြန်မာပြန်ညံ့တယ်။
gtalk မှာ Font change တယ်။ ရဘူး။
အယ်ဖာက ဇော်ဂျီနောက်ဆုံးထုတ်က ကီဘုတ်အင်စတော်လာ လိုဘူးလားလို့ ကီဘုတ်သတ်သတ်တော့ အင်စတောလုပ်ဘူး။
Kas-7 လိုချင်တာပါ။ အလကားနဲ့ တစ်သတ်လုံးသုံးရမဲ့ဟာမျိုး။
အက်ဒမင်က ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာ တို့က ကျောင်းအိုင်တီခန်းထဲက စက်ကိုသုံးရတာလေ။ ဘာအင်စတောမှ မလုပ်အောင် အက်ဒမင်က လုပ်ထားတာကိုဆိုလိုတာပါ။
yeman wrote: »
ဘယ်လို ပြောရမှန်းကို မသိဘူး..
တကယ် ကွဲကွဲပြား ပြားသိချင်လို့ပါ့...
kaspersky ကို ကျွန်တော်က ကတ်ပါစကိုင်း လို့ထွက်တယ်လေ...
အခုဒီမှာလည်း update တွေ လာယူကြလို့ချင်ရင် ကတ်ပါစကီး ရဲ့ update ဆိုတော့ နားမရှင်းလို့ပါ.. :106:
ဒီမှာလည်း ကတ်ပါစကီး၊ ကတ်ပါစီးဆိုတော့... ချစ်စနိုးနဲ့ များခေါ်ကြတာလား...
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်များ အသံထွက်မှားနေသလားဆိုတာ... ၀ိုင်း၀န်း ပြုပြင်ပေးကြပါဦးဗျာ.. :77:
သူက ရုရှားကထုတ်တာလေ။ ရုရှားအသံဆိုတော့ စကီးလို့ဘဲထွက်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ရုရှားနာမည်တွေမှာလည်း စကီးတွေဘဲတွေ့တယ်။ စကိုင်းမတွေ့ဖူးဘဲကိုး။
စာရေးဆရာနာမည်ကြီးတယောက်က ဒေါ့တိုယက်စကီး ဆိုလား
ဘာတဲ့ ဟိုတုန်းက သမတ၀င်ရွေးခဲ့တယ်ထင်တယ်။ သူ့နာမည်က ဇိုင်ရင်စကီး ဆိုလား
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စကီးဖြစ်ဖြစ် စကိုင်းဖြစ်ဖြစ် ဗိုင်းရပ်စ်သေရင်ပြီးတာပါဘဲလေ ... ဟီး